» “किन बगाउदैछ डलरको खोलो ? MCC पास भएको महिना, नबित्दै फेरि ८१ अर्ब दिदै” “किन बगाउदैछ डलरको खोलो ? MCC पास भएको महिना, नबित्दै फेरि ८१ अर्ब दिदै” – हाम्रो खबर
2022, March 14th, Monday
हाम्रोखबर संवाददाता 13 Views
“सर्वाधिक विवादपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसैबीच अर्को खुसीको खबर बाहिरिएको छ । अमेरिकाले नेपालमा फेरि डलरको खोलो बगाउन लागेको छ । अमेरिकाको यो सहयोगलाई धेरैले रहस्यमय भन्दै प्रश्न समेत उठाइरहेका छन् ।
“उसले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट (एमसीसी)को ५० करोड डलर अनुदानको सम्झौता अनुमोदन भएको हप्तापछि नेपाललाई नियमित अमेरिकी सहायता जारी राख्न नयाँ पाँच वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलर अर्थात करीव रू. ८१ अर्ब बराबरको अनुदानमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
“सहज रुपमा काम अगाडि बढ्यो भने अबको दुई हप्तापछि नेपाल–अमेरिकाबीच नयाँ सहायतामा सम्झौता हुनेछ । प्रस्तावित सहायता अमेरिकी सरकारले युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) मार्फत सन् २०२१ जुलाईको मध्यसम्मको पाँच वर्षमा गरेको कुल वितरणभन्दा करीव १०० मिलियन डलर बढी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
“मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले यस अवधिमा आफ्नो नियमित सहायता च्यानलबाट ५६०.५३ मिलियन डलर निकासा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा अमेरिकी सहायता एजेन्सीले १०५.९४ मिलियन डलर निकासा गरेको थियो ।
“अमेरिकाले युएसएआईडीमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको नियमित अमेरिकी सहायतासम्बन्धी अन्तिम सहायता सम्झौता गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सकिएपछि नेपाल र अमेरिकाबीच नयाँ सम्झौताका